Wholesale Side Anosimudza Mugadziri uye Mutengesi | CCMIE
Basa: kubata zvakachengeteka midziyo yekutakura uye zvimwe zvinhu kubva / kune mamwe marori
Rated chinzvimbo: 37 tani
Kunopindirana divi: 14100mm x 2500mm x 4100mm
Kutakura: 20ft, 40ft midziyo
Ekisero: 3 ekisero, 13T Fuwa
Tire: 12R22.5, 315 / 80R22.5, 11.00R20
Kumhara giya: JOST brand
Electrical system: 24V, mwenje ye LED, 7-pini Socket (ye7 waya tambo)
CCMIE 45T matani Container Side Loader Trailer inogadzirwa muXuzhou, iyi modhi yakagadzirwa kubvira 2019, uye ine yakarongedzwa nemukurumbira brand isina waya kure controller uye Chinyorwa mashandiro. CCMIE inogadzira matani makumi mana nemashanu Container Side Loader Trailer yekurodha uye kudzikisa kushanda. Inogona kutakura uye kudzikisa 40ft mudziyo, 20ft mudziyo nematani makumi mashanu ekusimudza chinzvimbo.
CCMIE 20ft 40ft mudziyo padivi loader tirera ine yepamusoro anosimudza Unyanzvi uye Mutengo unoshanda mudziyo wekusimudza uye yekufambisa michina. CCMIE inopa 40ft mudziyo padivi loader kuti isangane nemidziyo yese yekubata zvinodiwa, kutakura iyo 20ft, 40ft 40HQ mudziyo.
CCMIE Mudziyo wedivi loader waita kuti basa rishanduke, Kuchengetedza nguva nekuvandudza kugadzirwa kwevanogutsikana vatengi kutenderera pasirese. CCMIE Inogadzira mudziyo padivi loader tirera yekusimudza uye kutakura midziyo. Uye isu tinogamuchira hwakavimbika, hunoshanda uye hwakachengeteka tekinoroji.
Yezve furemu dhizaini, izvo zvekusimbisa zvivakwa zviri kushandisa yakakwenenzvera simbi Uye CCMIE mudziyo wekufambisa wedivi loader semi-matairaira anotora epamberi dhizaini dhizaini.
Isu kuCCMAIE tinopa vatengi vedu vanobva kumativi ese epasi vane yakanakisa yepamusoro maSide Lifters uye vekutanga-kirasi Side Vanosimudza vatengesi. Kuve nyanzvi yekugadzira mundima iyi, isu ikozvino tawana hupfumi hwakanyanya ruzivo mukugadzira uye manejimendi yeakanakisa-kutengesa China Side anosimudza Container Trailer 40 Makumbo Kurutivi Simudza Container Trailer iri Kutengeswa, uye akawana ruzivo rwakanyanya kwazvo rwehunyanzvi, isu tinotenda Izvi zvinoita kuti tisiyane nemakwikwi uye zvinobvumidza vatengi kusarudza uye kuvimba nesu. Isu tese tinotarisira kugadzira kuhwina-kuhwina zvibvumirano nevatengi vedu, saka tifonerei nhasi uye muite shamwari nyowani!
Yakanakisa-kutengesa China Side anosimudza, Side Loader, kwemakore akawanda kudaro, isu takagara tichitevedzera mutemo wevatengi-wakanangana, mhando-based, kutsvaga kugona uye kubatsirana. Isu tinovimba kuti, nekutendeseka kukuru uye nekufarira, isu tichave tinokudzwa kuti tikubatsire iwe munezve musika.
tarisa padivi anosimudza hydraulic system mwedzi wega
Yakachena oparesheni vharafu pamusoro
Chengeta hydraulic oiri isina guruva, zadza hydraulic oiri mwedzi yega yega kusvika kumatanhatu.
Tarisa kupfeka kwemasiraidhi mapedhi, kutsiva kana zvichidikanwa
Tarisa hydraulic huwandu hwemafuta mazuva ese, wedzera kana zvichidikanwa
Tarisa hydraulic pombi, chubhu yakabatana uye humburumbira, kana mafuta avuza, sunga majoini kana kutsiva zvisimbiso kana ukawanikwa wakavuza mafuta
Chenesa kana kutsiva yakakwira yekumanikidza hydraulic mafuta firita uye dzosera oiri sefa yega yega mwedzi mitanhatu, bvisa mafuta plug, dhonza mafuta, wobva wabvisa goko, suka kana kutsiva firita
Pashure: Rutivi Rwekusimudza Crane
Zvadaro: Kurutivi Loader Trailer
Mudziyo Reach Stacker-ZHRS4531-5
Mudziyo Forklift Rori